काउलीको बीउ नष्ट भए पछि ऋण कसरी तिर्ने ? - Shirish News
काउलीको बीउ नष्ट भए पछि ऋण कसरी तिर्ने ?
२०७८ भाद्र ११, शुक्रबार ११:१७ बजे
तस्विर : अमृत कुमार महतो
महोत्तरी । दिनुहुँ बर्षा कारण महोत्तरीका किसानहरुलाई काउलीको बीउ पालमुनी कुहिने समस्या भएको छ । अघिल्लो वर्ष काउली रोपाई सकेपछि बर्षा हुँदा कम क्षति हुने गर्थ्यो । तर, यस बर्ष असार, साउन र भदौको पहिलो सातामा नै खेत पानीले डुबान भएपछि वीउ पलाष्टीकको पालमुनी नै कुहिएर गएको हो ।
बर्दिबास नगपालिका – ९, पशुपतिनगरकी ३६ बर्षीय दिल कुमारी मायाले दुई ठाउँमा काउलीको बीउ झारेका थिए । तर लगातारको बर्षाले सबै नष्ट गरिदिएको छ । २ हजार रुपैयाको बीउ र खेत जोताई गरी ५ हजार नोक्सान भएको दिल कुमारीले बताए । ‘यस पालीको काउली खेती भएन । काउली रोपाईको बेला थियो ।’, दिल कुमारी भने, ‘तर, बर्षाले सबै सोत्तर बनायो ।’
उनले निर्धन बैंकबाट १ लाख रुपैयाँ ऋण काढेर काउली खेती गर्न लागेका थिए । बीउ नष्ट भएपछि ऋण कसरी तिर्ने भन्ने चिन्ता भएको छ । यस्तो विनासकारी बर्षा कैयन सालपछि आएको उनको भनाई छ । पहिला–पहिला बर्षा भएपनि काउलीको बीउलाई क्षति गरेको थिएन ।
उनको श्रीमान् आठ बर्ष अघि कतारमा बिते । उनी तीन सन्तानकी आमा छिन् । लगातारको बर्षाले गरिवलाई घर न घाटको बनाएको बताउँदै उनी रोइन् ।
अर्का स्थानीय गोनर महतोले २ कठा खेतका लागि बीउ उत्पादन गरेको थियो । बर्षाको पानीले नष्ट गरिदिए ।
‘चारदिन अगाडी वारीमा बीउ हरियो देखिन्थ्यो’, महतोले भने, ‘‘शुक्रबार बिहान हेर्दा पालमुनी जग्गा मात्रै देखें ।’ काउलीको बीउ नष्ट भएपछि २ लाख रुपैया बराबरको नोक्सान भएको उनले बताए ।
अर्का किसान सुकृत महतोले २ कठा खेतमा काउली रोपेको थियो । केही महिना भित्रै टिपेर बजार लैजाने उनको योजना थियो । तर भारी बर्षाले नष्ट गरि जमिनमै मिलाइदिएको दुखेसो उनले पोखे ।
जिल्लामै सबैभन्दा बढी तरकारी उत्पादन हुने क्षेत्र हो, बर्दिबास नगरपालिका । बर्दिबास नगरपालिकामा बर्षाले ३ करोड रुपैयाँबराबरको उत्पादन हुने काउलीको बीउ नष्ट भएको प्रारम्भिक तथ्यांक छ । काउली किसानले रोप्न मात्रै लागेका थिए । काउलीमा शतप्रतिशत क्षति पुगेको छ ।